Ho avy ny Mpampandry tany? | GAZETY_ADALADALA
Ho avy ny Mpampandry tany?
Posted on 29/05/2009 by gazetyavylavitra
Samy naheno daholo ny rehetra omaly fa nilaza ny hiverenany eto Madagascar ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. An’isan’lzay voalazany koa ny hoe hitondra miaramila mpampandry tany avy any ivelany ho aty amin’ny ‘tanindrazany’ (SADC ve? – tsy fantatro!).
Inona no azo tsoahina avy amin’ny tantara ?:
1* nisy ny krizy teto tamin’ny 2002 ireny (Mars Ravalomanana – Didier Ratsiraka). Nanangona Zanadambo Ravalomanana hifanandrina mivantana tamin’ny tafika Malagasy ( Izany hoe nisy ny affrontement, na fifanandrinana mivantana). Nisy ny maty sy ny naratra, betsaka ny fahapotehan-javatra. Fa adala ve izany ilay Ratsiraka Didier tamin’izany fotoana no tsy mba naka miaramila avy any ivelany hampandry ny ‘tanindrazany’ – toa naleony aza nilefitra sy niala teto ary nanao sesitany ny tenany mihitsy – angamba noho ny tombotsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka ao aminy – taorian’ireny hetsi-bahoaka (mouvements populaires) sy fifanandrinana (affrontements) ireny?
2* izao 2009 izao indray, misy ny olana Andry Rajoelina – Marc Ravalomanana) Niantso Ravalomanana ny amin’ny tokony hametrahan’ny Miaramila Malagasy ny fitaovam-piadiany. Koa tsy efa miteny ve izany fa hoe mipirima daholo isika Malagasy fa raha nahay nitondra vazaha ny hafa, dia izaho koa mba hitondra ny quota heveriko fa anjarako?
3* Fanontaniana ho an’ny rehetra: hopotehina marina ve no tanjona amin’ity firenena ity e? Toa fikolokoloana afom-pifandonana mantsy no misy hatramin’izay ka hatramin’izao raha ny fomba firesaka sy kabary heno etsy sy eroa no jerena. Tamin’ny 2002 raha nisy ny fifanandrinana, mba nanao concession toy izay misy amin’izao fotoana ve ny avy amin-dRavalomanana? Ankehitriny raha ekena indray ny hifanatona sy hiray latabatra amin’ireo mpomba azy, dia toa atao resa-jaza ny raharaha, ka rehefa te-ho avy dia tonga, ary rehefa te-hanepoka dia milentika. Fa entina aiza marina ity firenena ity e? Ary mbola tena azo lazaina ho tia tanindrazana ve izany olona mitondra tafika ivelany hampandry tany tsy misy fifandonana izany? Amiko mantsy ny ilaina hampandriana dia ny zavatra mikorontana ambony ambany, ka mila averina ho tony. Ekeko fa misy ny famoriana olona etsy sy eroa (raha ho azo raisina ho fifanandrinana mivantana koa izany), fa antony iray ve izany hitondranao tafika hoe ‘hampandry tany’? Sao mba eritreritra diso tanteraka ny fisainana toy izany zalahy a! Tena efa fanaovana tsinontsinona ny Malagasy iray manontolo izany amiko an! Raha tsy Zanadambo no ilazàna indray izany entiny ho aty Madagasikara izany, dia inona indray no mety hilazàna azy? Zanakombivaviberonono ve sanatria? Vazivazy iray an-dàlana fa mba eritrereto ihany ny Malagasy tsy mandady harona sy ny taranany, raha ny anareo efa tsara lamina sy tsy misy atahorana hatrany amin’ny zafin-kitrokely sy ny zafin’ny tsy fantatro any e!
Aiza re ilay Malagasy sy ny fikatsaham-pihavanana fahiny e? Izao ka dia lasa ny seza sy ny vola no tompon’ny laka.
Efa tokony hofafàna any anaty boky koa ilay ohabolan-drazantsika hoe ‘Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana‘ sy ilay iray hoe ‘aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka‘
Tokony hovàna hoe
»Ny vola no maha-rangahy,
ny an’ialahy mbola tiako ho ahy,
ka aoka tsy handiso ahy,
raha manao ny toy izao aho
Filed under: politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: affrontements, Andry Rakoelina, mouvements populaires, mpampandry tany, Ratsiraka, Ravalomanana, SADC |
« Anao ny fitenenana (kabarin-Ra8 26/05/2009) Vetso.serasera.org »
rajoela, on 30/05/2009 at 7:20 said:
fa iza marina moa no arovan’ ny « tafika malagasy » e? Ny Malagasy ve sa ny TGV?.Iza moa ireo manamboninahitra ao amin’ io » tafika malagasy » io. Olona nanao tsolotra na mahitahita no afaka mianatra any amin’ ny SEMIPI< fa raha olona tsotra sy merina ianao dia tsy afaka ny hianatra any. Ny tenako no anisan' ny voan' io tamin' ny 1980. Afaka BEPC sy seconde aho ary afaka tamin' ny concour antsoratra ary nantsoina tany fiadanana hiandry ny fanampahankevira farany. Ireo voaray taorian' ny fanasivanana dia tsy ny mahay< fa izay manana dadatoa colonel. Anisan' izany ny zanaky ny minisitry ny fiarovana tamin' izany fotoana izany, izay tsy nahazo bac akory dia efa lasa lieutnant. Tokony ho ravana io tafika amin' izao fotoana izao io ary soloina vaovao.
Ragasy mafyloha, on 30/05/2009 at 10:11 said:
A mon avis, ce n’est que du bluff pour mettre la pression sur TGV et sur le CAPSAT.
On pourrait seulement imaginer l’ arrivée d’une force étrangère d’interposition que dans le cas où la médiation internationale actuelle échoue et que s’ensuit une guerre civile de grande ampleur.
A mon sens, si les négociations devaient être bloquées définitivement, l’ Armée malgache désarmerait le CAPSAT, instaurerait un directoire militaire et enverrait TGV et RA8 dos à dos.